နာကျင်မှုမရှိဘဲ ဒေါက်တွေစီးနိုင်စေဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် (9)ချက် - Lifestyle Myanmar
in Fashion, Health & Beauty, Lotaya
ဒေါက်ဖိနပ်တွေကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲ? ကဲ,,,ပျိုမေတို့ရေ့ ဒေါက်ဖိနပ်စီးတိုင်း ခံစားရတဲ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို မခံစားရစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပြောပြပေးပါမယ်နော်။
၁။ ဖိနပ်ဆိုဒ် မှန်ရဲ့လား?
ဂရုစိုက်ရမယ့် ပထမဆုံး အရေးကြီးတဲ့အရာက သင့်ဖိနပ်အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်၊ ဒေါက်က သေးလွန်းရင် ခြေထောက်တွေ နာပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နာကျင်မှုကိုမဆို ကာကွယ်နို်ငဖို့ မှန်ကန်တဲ့ ဖိနပ်ဆိုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
၂။ Food cushions /ဂျယ်ထည့်ပါ
နူးညံ့တဲ့ ဖိနပ်အခုအခံလေးတွေ (သို့) ဂျယ်လို ဖိနပ်အောက်ခံလေးတွေကို ဖိနပ်မစီးခင် သင့်ဖနောက်အောက်မှာ ခံထားနိုင်ပါတယ်။ ကူရှင်မျက်နှာပြင်က သင့်ဒေါက်စီးတဲ့အခါ ခြေထောက်နာကျင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဒီဖိနပ်အခံလေးတွေ ရှာမတွေ့နိုင်ရင်
ခုနကပြောတဲ့ ဖိနပ်အောက်ခံလေးတွေ ရှာမတွေ့ဘူး၊ မရှိဘူးဆိုရင် လစဉ်သုံး pads လေးတွေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖနောင့်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်နှင့် အရွယ်အစားရအောင် pad ကိုညှပ်ထုတ်ပြီး ဖိနပ်ထဲမှာ ခံစီးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ခြေချောင်းလေးတွေကို တိတ်ပတ်ပါ
ခြေခလယ်နဲ့ ခြေသူကြွယ်ကိုပူးပြီး တိတ်နဲ့ပတ်တာက နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ medical tape နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။
ထူတဲ့ဒေါက်တွေက ပါးတဲ့ဒေါက်တွေထက် နာကျင်မှု ပိုနည်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါက်ထူတဲ့ ဖိနပ်ကို စမ်းစီးကြည့်ပါ။
ဖိနပ်ရဲ့ ဒေါက်မြင့်လေလေ သင့်အတွက်ပိုပြီးနာကျင်လေဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် အလယ်အလတ်ဒေါက်မျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ အရမ်းမြင့်တဲ့ ဒေါက်တွေ စီးဖို့လိုအပ်လာရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲစီးပါ။
၇။ ပလာစတာ ဆောင်ထားပါ
ဒေါက်ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း အနာကပ်ပလာစတာတွေ ဆောင်ထားရပါမယ်၊ ပိုကောင်းတာက သင့်ဖနောင့်တွေ အရည်ကြည်ဖုအချို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ရင် သင့်ခြေချောင်း (သို့) ဖနောင့်တစ်ဝိုက်မှာ ကြိုတင်ပြီး ပလာစတာကပ်ထားပေးပါ။
၈။ ခြေထောက်တွေကို ဆန့်ထုတ်ပါ၊ နှိပ်ပေးပါ
အထူးသဖြင့် နေ့တိုင်းဒေါက်ဖိနပ်စီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒီနည်းလမ်းက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ညမအိပ်ခင်မှာ ခြေထောက်တွေနဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကို ဆန့်ပေးပြီး နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါက ခြေထောက်က အနားရစေပြီး ဒေါက်တွေကို နောက်တဖန်ပြန်စီးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
၉။ အရမ်းမတ်စောက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ ဒေါက်တွေကို ရွေးပါ
ခြေထောက်တွေက မတ်စောက်လေလေ ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ နာကျင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုနည်းချင်ရင်တော့ တစ်ပြေးတည်းခုံမြင့်မျိုး (သို့) အရှေ့မှာ ခုံပါတဲ့ ဒေါက်မျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။